China Hotel na-egbochi ihe eji eme ụlọ na-emepụta ụlọ na ndị na-emepụta | Pijiang
ihe eji arụ ọrụ biya
Ihe eji eme ya
Home-Hotel-bars brewing tool
Ngwá ụlọ izi ihe
Nnukwu ebe omume biya biya
Ngwunye Micro ebe omume biya
N'ụlọ nkwari akụ ụlọ akụrụngwa mbido ụlọ
Ndị otu PJM Brewery na-ejikọ ọtụtụ iri afọ nke ahụmịhe injin na-arụ ụlọ, ebe a na-azụlite, injinịa usoro, na-akpụpụta sistemụ idebe ihe ọcha yana sistemụ akpaaka & usoro njikwa.
Ngwongwo igwe ahia ahia Micro gụnyere nke sitere na 8BBL ruo 30BBL ma obu olu ndi ozo choro. Anyị bụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka ị beerụ biya biya, nwere ike mejupụta ihe ndị ị na-emekpa ụlọ gụnyere ihe igwe ihe biya biya, otu biya, biya biya ma ọ bụ ahaziri iche.
KPỌTA UGBUA EGO PDF
1. Nhazi zuru oke, nke ohuru na nke di elu.
2. Ntinye sistemu inye aka nke ihe ndi ozo n’ebubata ma webata ya.
3. Usoro inyeaka bụ ndụ ogologo, arụmọrụ dị elu, ogo dị elu, enweghị obere ego.
4. Akwụkwọ anaghị agba nchara (304,316) maka tankị niile.
5. Ngwa eletriki ruru UL, cUL, CE, PED, ụkpụrụ mbupụ.
6. ingkwado voltaji sistemụ inyeaka na ugboro ole dabara na ọkọlọtọ gị.
7. Teknụzụ mmepụta ọhụrụ.
8. Ike kwụsiri ike, arụmọrụ dị elu, njikwa njikwa siri ike.
9. Ngwa a nabatara ihe nkwonkwo agbatị 100% TIG, enyo enyo.
10. Ihe ngosi CAD, enyemaka ntinye, nzukọ, ọzụzụ.
Ekwesịrị itinye ngwa zuru ezu dị ka ndị a:
Sistem brew Ngwa Nkowa
Sistemụ egwe ọka Mili Ugboro abụọ gbara, Noise <60db
Sisikpo kpo oku Ilergbọ mmiri Electric, gas, oil, Coal Type / CE asambodo
Sistemụ Mashing Mash / Lauter tun Shell nke ime: SUS304, ọkpụrụkpụ: 3.0mm
Shell dị na mpụga: SUS304, ọkpụrụkpụ: 2.0mm
Esi mmiri / Whirlpool Insulation: Polyurethane, ọkpụrụkpụ: 80mm
Ọkpụkpọ Laser Mpepu V-waya
Igwe mmiri na-ekpo ọkụ Mfe nfe na –echekwa nza ịkwa iko
Akụkụ manhole nke nọrọ maka ọka
Sistemụ usoro Tankị ịgba mmiri Dome dị elu na cone na ala; ala cone 60 ogo
Shell nke ime: SUS304, ọkpụrụkpụ: 3.0mm
Insulation: Polyurethane, ọkpụrụkpụ: 80mm
Nrụgide ule: 0.3Mpa, Nrụgide ọrụ: 0.18Mpa
Manhole dị elu ma ọ bụ manhole dị n'akụkụ
Sistem Ntinye Mmiri Mmiri Ice Jiri maka igwe oyibo wort, tankị gbaa ụka na BBT.
Ngalaba Chiller World-Famous Cool mee akara n'oge na-adịghị anya, iji maka mmiri mmiri Glycol.
Usoro nhichapu CIP Disinfection tank / Alkaline tank Kwadebere ihe ndị na-eme ka ọkụ dị ọcha, dị ọcha maka tanki niile mgbe ọ kwụsịrị ebe omume biya.
Usoro ịchịkwa Mashing / Fermenting / jụụ / CIP Na-ejikwa ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ, ihe ngosi ya na ihe mgbapụta na gbanyụọ
Companylọ ọrụ ahụ na-agba mbọ ịkwalite ezigbo biya biya, nke dị iche iche, nke dịgasị iche iche, ahụike na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, dị ka ihe ọ nationalụ nationalụ nke mba nwere ike ịnabata ma rie ya.
China magburu onwe so na Home-Hotel-bars biya b ...
3BBL-8BBL ụlọ ọka bali na-ere / ebe a na-eme ebe a na-eme ihe
ụlọ oriri na ọ restaurantụ miniụ mini beer ebe omume biya ebe akụrụngwa ...
2020 na-ere ọkụ dị mma dị elu conical biya ferment ...
Ngwaọrụ biya na-akụ ihe ọ Compleụwingụ zuru ezu maka ...
mmanya mmanya igwe 500L 1000L 2000L biya br ...